« Lalao Olympika ho an’ny tanora » (JOJ) – Fibatana fonjamby: nitana ny rambony i Miharintsoa sy i Berthine | NewsMada
« Lalao Olympika ho an’ny tanora » (JOJ) – Fibatana fonjamby: nitana ny rambony i Miharintsoa sy i Berthine
Tsy namokatra ny solontena malagasy, nandritra ny “Lalao olympika ho an’ny tanora” (JOJ 2018), taranja fibatana fonjamby, notanterahina tany Buenos Aires, Arzantina. Nitàna ny rambony avokoa, na ny sokajy vehivavy, na ho an’ny lehilahy.
Gisitra avokoa ireo solontena malagasy teo amin’ny fibatana fonjamby, teo amin’ny “Lalao olympika ho an’ny tanora” (JOJ 2018). Fihaonana, tanterahina any Arzantina. Samy resy teo amin’ny fihodinana voalohany avokoa mantsy Ravakiniaina Berthine sy Rajaona Miharintsoa. Teo amin’ny vehivavy aloha, laharana farany i Berthine, eo amin’ny sokajy 44 kg ho an’ny sokajy “A”. Tsy nahabata afa-tsy 40 kg mantsy izy, teo amin’ny «arraché», raha toa ka 50 kg monja ny teo amin’ny «haltérophilie».
Nahitana elanelana maro ny lanja raha nitaha tamin’ilay Venezoelianina, i Echandia Zarate Katherine, izay nahabata hatramin’ny 72 kg teo amin’ny «arraché» ary 90 kg ho an’ny «haltérophilie».
Teo amin’ny lehilahy nandraisan’i Miharintsoa anjara indray, ho an’ny sokajy 56 kg, sokajy “A”, laharana fahenina tamin’ireo mpifaninana enina izy. 85 kg ny vitany teo amin’ny «arraché» raha 110 kg kosa teo amin’ny «haltérophilie», izay nitoviany tamin’ilay teratany espaniola, i Perales Garcia Jose. Nitana ny laharana voalohany ilay teratany Vietnam, i Ngo Son Dinh, nahavita nibata 114 kg, teo amin’ny “arraché”, ary 148 kg teo amin’ny “haltérophilie”.
Tapitra hatreo, araka izany, ny lalan’ny Malagasy eo amin’ny fibatana fonjamby, raha jerena ireo vokatra ireo. Tsy tapitra hatreo anefa ny fifaninanana ho an’ny Malagasy fa mbola eo ny atletisma handraisan-dRakotomalala Chrystele anjara eo amin’ny halavirana 400 m. Ny alakamisy 11 oktobra ho avy izao izy no hiatrika izany.
Omaly kosa, niakatra “tatami” Andriamifehy Mireille, ho an’ny taranja judo, sokajy – 52 kg, saingy tsy mbola voarainay ny vokatra tamin’izany, hatramin’ny fotoana nanoratana, fa hotaterina eto ihany, amin’ny fotoana manaraka.